Kuzvipira Kwemitemo - World March
musha » Maitiro Okuzvipira
The humanist uye musayendisiti Salvatore Puledda akaita 7 1989 January muna Florence, guta guru dzakaitika Humanism, mumwe zvipo Galileo Galilei, Giordano Bruno nevamwe Precursors nesayenzi nhasi. Pachiitiko ichocho akava pachena kuzvipira pakati vechikamu kurwa kusarudza kuti mberi kwesayenzi riri basa yevanhu.
Kubva pachiitiko ichocho kwakatanga chirongwa muNyika pasina Hondo kuita chiito chinomutsa uye chinotsanangura kuzvipira kune vanofarira. Iyo "Ethical kudzipedza" yakagadzirwa uye chiitiko chakaitwa kuYunivhesiti yeDhigiri reDhivhari muMadrid umo maapurofesa, mapurofesa uye vadzidzi vakazviita mumitauro ye10.
Isu tiri munyika umo vamwe vanoda kutengesa ruzivo rwavo uye ruzivo kune chinangwa chipi nechipi pamutengo upi zvake. Izvi zvakafukidza nyika yedu nemichina yekufa. Vamwe vakashandisa huchenjeri hwavo pakugadzira nzira itsva dzekushandisa, kunyarara, kupedza hana yevanhu nevanhu.
Ndivo varume nevakadzi vakashandisa Science uye Knowledge kuderedza kuneta uye nzara, marwadzo uye kutambura Humanity, kubvisa gag kubva mumuromo vanomanikidzwa, kupa izwi uye kuvapa chivimbo.
Nhasi, ari mambakwedza wechitatu chemakore kuWest, kupona yose yevanhu kwemarudzi kuri pangozi uye pamusoro Earth, musha wedu tose, zvinotangazve kwezvinhu zvipenyu nezvakazvipoteredza dambudziko uye dambudziko zvenyukireya kuenda apa.
Saka tinokumbira kubva pano vose masayendisiti, vatsvakurudzi, vadzidzisi uye vadzidzisi vemunyika kushandisa ruzivo rwazvo kune rubatsiro rwakakwana rwevanhu.
Ndinovimbisa (kupikira) kune shamwari dzangu, vadzidzisi, mhuri uye vandinoshanda navo vasingamboshandisi muupenyu hwangu ruzivo rwakagamuchirwa nekudzidza munguva yemberi kumanikidzira vanhu, asi zvinopesana kushanda kusunungurwa kwavo.
Ndinozvipira ndoga kushanda kuti kubviswa kwekutambudzika mumuviri uye kutambura mupfungwa.
Ndine chido chokusimudzira rusununguko rwekufunga nekudzidza kubva mumutambo wekusina chisimba kuburikidza nekutsvaga "kubata vamwe sezvandingadi kurapwa."
Zivo yakanaka inotungamirira kururamisiro
Ruzivo rwakanaka runodzivirira kukonana
Ruzivo rwakanaka runotungamirira kukukurukurirana nekuyananisa
Tinokumbira kubva pano kusvika kumayunivhesiti zvose, tsvakurudzo anotanga, mukuru zvikoro, zvikoro izvi, yetsika kuzvipira akafanana Hippocrates kusikirwa vanachiremba iri hwakatangwa kuitira kuti ruzivo inoshandiswa kukurira kurwadziwa uye kutambura kuti sevanhu pasi.